Multi-Vitamin: ကမ္ဘာ့ မုတ်ဆိတ်မွေးအရှည်ဆုံး အမျိုးသမီး
အမွေးတွေ ဖုံးလွမ်းနေခဲ့ပါတယ် ။သူမ၇ဲ့ အမေက သူမကို မိန်းကလေးတစ်ယောက်သာ ဖြစ်စေချင်တာကြောင့် ဖိုမျိုးပွားအင်္ဂါကို ဖြတ်တောက်ပစ်ပေးဖို. ဆရာဝန်များကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ် ။
သူမရဲ့ အဖေဟာ သူ့ရဲ့ မုတ်ဆိတ်မွေးတွေပေါက်နေတဲ့ သမီးကြောင့် ရှက်ရွံ့ခဲ့ပါတယ် ။ သို.ပေမဲ့လည်း အဖေဖြစ်သူဟာ ဒီမုတ်ဆိတ်မွေးပေါက်နေတဲ့ သမီး၇ဲ့ အခြေအနေဆိုးကိုအမြတ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ် ။ မစ္စ ၀ှီလာ ဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက ပြပွဲတွေမှာ လူထူးလူဆန်းတစ်ယောက်အဖြစ် တင်ဆက်ပြသခြင်းအလုပ်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး မိသားစုကို ပိုက်ဆံ၇ှာပေးခဲ့ရပါတယ် ။
မစ္စ ၀ှီလာဟာ ရစ်ချတ်ဆိုသော အမျိုးသားတဦးနဲ့ အိမ်ထောင်ကျခဲ့ပြီး ရစ်ချတ် ၀ီလီယံ ဆိုသော သားတစ်ဦးကို ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပါတယ် .. သူမဟာ အမျိုးသားကဲ့သို့ အရိုးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက် ပုံ၇ှိပြီး ကျားဟိုးမုန်းတစ်ဝက် မဟိုမုန်းတစ်ဝက်ဖြစ်နေတာကြောင့် မီးဖွားစဉ်အခါက သားဖွားဆရာဝန်များရဲ့
အမြင်မှာ မစ္စ ၀ှီလာဟာ သားဖွားနိုင်ဖို. မဖြစ်နိုင်ဘူးလို. တထစ်ချတွက်ဆခဲ့ပေမဲ့ သူတို.အထင်မှားခဲ့ပါတယ် ။ သို.သော်လည်း ကံဆိုးသူ မစ္စ ၀ှီလာဟာ သူမ၇ဲ့ကလေး နဲ့ ရက်အနည်းငယ်သာ အတူတူနေခွင့်ရခဲ့ပြီး ကလေးရဲ့အဖေက သားငယ်လေးကိုယူဆောင်ပြီး သူမနဲ့ဝေးရာကို ထွက်သွားခဲ့ပါတယ် ။
အကျဉ်းချုံးပြောရရင် သူမအသက် ၆၂နှစ်အရွယ်မှာ အသက် ၃၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သောသားဖြစ်သူနဲ့ ပြန်လည်ဆုံစည်းခွင့်ရခဲ့ပါတယ် ။ကမ္ဘာတစ်လွားထူးထူးခြားခြား ပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်း ပြသလေ့ရှိတဲ့ အမေရိကန်ရုပ်သံအစီအစဉ်တစ်ခုကိုကြည့်ပြီး သားဖြစ်သူ ရစ်ချတ်ဂျူနီယာဟာ တင်အဆက်အသွယ် ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။
Posted by 925 at 06:23